Mompera Remi Rahajarizafy Nivoaka ny boky andiany manaraka
Navoaka tamim-pomba ofisialy ny talata hariva teo teny Ankorondrano ireo boky nosoratan’i Mompera Remi Rahajarizafy notontosain’i Mompera Justino Bethaz.
Mgr Rémi Joseph Rabenirina Feno 50 taona sahady ny naha Klerje azy
Feno 50 taona sahady ny naha Klerje an’ny Mgr Rémi Joseph Rabenirina.
FJKM Ambohidratrimo Marovatana Fanavaozana Feno 40 taona ny SAMPATI
Feno 40 taona ny SAmpana MPAnazava sy TIly (SAMPATI) ao amin’ny Fjkm Ambohidratrimo Marovatana. Haharitra herintaona ny fanamarihana ny fankalazana ny jobily.
Miara-miasa sy mandala ny Fihavanana ary ny Fampihavanana Malagasy ity AMCM eto Madagasikara ity. Ka noho izao fahatongavan'ny Asaramanitra izao dia niarahaba sy nirary soa ho an’ny filoha Rakotomanana Honoré amin’ny maha-Raiamandreny azy eto anivon’ny Firenena ireto mpitarika vondrom-pinoana ireto ary vonona ny hifanome tànana ho amin’ny fampadrosoana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fanajana ilay soatoavina maha-Malagasy dia ny “Fihavanana”. Tsy mifandrafy ihany koa fa miara-miasa tanteraka izy ireto eto Madagasikara ary hiara-hiasa amin’ny fitondram-panjakana ihany koa. “Laika” ny Firenena Malagasy, hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ka mila mifanome tanana ny rehetra ho fampanjakana ny tena fihavanana marina mba hiteraka Fampandrosoana maharitra ho an’nyfirenena. Ny taona 2013 no niforona teto Madagasikara ity vondrom-pinoana “AMCM” ity ary efa mielipatrana manerana ny Nosy ankehitriny.